अर्थ / बैंक / प्रविधि
खबरमुकाम । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्ती डिजिटल वालेटले अब ग्राहकले सजिलै खल्तिबाट आफ्नो बैंक खातामा निःशुल्क रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
ग्राहकहरुले यस सेवाअन्तर्गत खल्तीबाट आफ्नो एक बैंक खाता सेभ गरी त्यसमा प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको अधिकतम ५ पटक वा रू. ५ हजार र दैनिक ३ पटक वा रु. ५ हजार सम्मको रकम निःशुल्क ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, अब खल्तीबाट खल्तीमा उपलब्ध कुनै पनि बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्दा ५०५ सम्मको क्यासब्याक पाइने जनाइएको छ । उदाहरणका लागि, यदि बैंक ट्रान्सफर शुल्क रु. २० भएमा, रु. १० क्यास ब्याक पाउन सकिनेछ ।
खल्ती डिजिटल वालेटका मार्केटिंग अफिसर साकार केसीले ग्राहकहरुको अमूल्य सल्लाह तथा सुझावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यस निःशुल्क पैसा पठाउन सकिने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । केसीले उक्त सेवाले ग्राहकको समय र पैसा बचत गर्न थप टेवा पुर्याउने विश्वास गरेको कुरा पनि बताए ।
हाल खल्ती वालेटको प्रयोग गरी ६० भन्दा बढी बैंकमा पैसा पठाउन सकिन्छ । साथै, मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा टिभीको बिल भुक्तानी, फिल्म, प्लेन, फोहोर व्यवस्थापन शुल्क, ई-कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने लगायतका सेवाहरु लिन सकिन्छ।